သိန်းဆယ်နဲ့ချီတဲ့ Branded ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်ကမှန်းမသိလက်ဆောင်ရခဲ့လို့ ချစ်သူဆီကတောင် စိတ်ကောက်ခံနေရတဲ့ ဇေရဲထက် - Cele Connections
အသက် (၂၀) �...
သိန်းဆယ်နဲ့ချီတဲ့ Branded ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်ကမှန်းမသိလက်ဆောင်ရခဲ့လို့ ချစ်သူဆီကတောင် စိတ်ကောက်ခံနေရတဲ့ ဇေရဲထက်
bilie | 24/10/2020 | Celebrity | No Comments
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး ဇေရဲထက်က အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာချိန်ကစပြီး အခုချိန်ထိ နာမည်ပျက်မရှိပဲ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေသူတစ်ဦးပါပဲ။ ဇေရဲထက်က သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုကြောင့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကား တော်တော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီး လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အနည်းငယ် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇေရဲထက်ကတော့ အရင်ကလို ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်ဖြစ်တော့ပေမယ့် သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဇေရဲထက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဇေရဲထက်က သိန်းဆယ်နဲ့ချီတဲ့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကို ဘယ်ကမှန်းမသိလက်ဆောင်ရခဲ့လို့ ချစ်သူဆီက စိတ်ကောက်ခံနေရတယ်ဆိုပြီး အခုလိုပဲ ပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “Woow. My birthday present surprise ဘယ်သူလည်းဟင် သိချင် အားးး သိန်း ဆယ်ကျော်တယ်လေ. Very very happy. စေတနာကောင်းကံကောင်းတယ်တဲ့ အခုလို covidမှာ စေတနာထားပြီးပို့ပေးတဲ့ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့လူ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ 🙏🙏🙏 အကြို surpriseနဲ့တူ.. ပစ္စည်းပို့တာ ဘယ်သူမှန်းမသိ စိတ်ခုန်တာကတပိုင်း piggy 🐷 က ပွားတာကတပိုင်းနဲ့ ဝက်ဖြစ်အောင်စားနေမယ်ဒါပဲ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇေရဲထက်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း နာမည်ကြီး Branded ပစ္စည်းတွေကို စုဆောင်းတတ်သူဖြစ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူကလည်း ဇေရဲထက်ကြိုက်တတ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကိုချည်း ရွေးချယ်ပြီး ပို့ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကံကောင်းလွန်းလှတဲ့ ဇေရဲထက်ကို ကြည့်ပြီး အားကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Zay Ye Htet’s fb
သိနျးဆယျနဲ့ခြီတဲ့ Branded ပစ်စညျးတှကေို ဘယျကမှနျးမသိလကျဆောငျရခဲ့လို့ ခဈြသူဆီကတောငျ စိတျကောကျခံနရေတဲ့ ဇရေဲထကျ
သရုပျဆောငျ မငျးသားခြောလေး ဇရေဲထကျက အနုပညာလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာခြိနျကစပွီး အခုခြိနျထိ နာမညျပကျြမရှိပဲ အောငျမွငျစှာ ရပျတညျနသေူတဈဦးပါပဲ။ ဇရေဲထကျက သူ့ရဲ့သရုပျဆောငျကောငျးမှုကွောငျ့ ဗီဒီယိုဇာတျကား တျောတျောမြားမြားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ရပွီး လကျရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ အနညျးငယျ အဆကျအသှယျ ပွတျတောကျနခေဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဇရေဲထကျကတော့ အရငျကလို ဇာတျကားတှေ မရိုကျဖွဈတော့ပမေယျ့ သူ့ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ ဇရေဲထကျရဲ့ လှုပျရှားမှုတိုငျးကို စိတျဝငျစားနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ဇရေဲထကျက သိနျးဆယျနဲ့ခြီတဲ့ တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှကေို ဘယျကမှနျးမသိလကျဆောငျရခဲ့လို့ ခဈြသူဆီက စိတျကောကျခံနရေတယျဆိုပွီး အခုလိုပဲ ပွောလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ “Woow. My birthday present surprise ဘယျသူလညျးဟငျ သိခငျြ အားးး သိနျး ဆယျကြျောတယျလေ. Very very happy. စတေနာကောငျးကံကောငျးတယျတဲ့ အခုလို covidမှာ စတေနာထားပွီးပို့ပေးတဲ့ ဘယျသူမှနျးမသိတဲ့လူ ကနျြးမာခမျြးသာပါစေ 🙏🙏🙏 အကွို surpriseနဲ့တူ.. ပစ်စညျးပို့တာ ဘယျသူမှနျးမသိ စိတျခုနျတာကတပိုငျး piggy 🐷 က ပှားတာကတပိုငျးနဲ့ ဝကျဖွဈအောငျစားနမေယျဒါပဲ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဇရေဲထကျကတော့ သူကိုယျတိုငျလညျး နာမညျကွီး Branded ပစ်စညျးတှကေို စုဆောငျးတတျသူဖွဈပွီး လကျဆောငျပေးတဲ့သူကလညျး ဇရေဲထကျကွိုကျတတျတဲ့ အသုံးအဆောငျတှကေိုခညျြး ရှေးခယျြပွီး ပို့ပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ကံကောငျးလှနျးလှတဲ့ ဇရေဲထကျကို ကွညျ့ပွီး အားကနြကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
“အခုလို Covidကာလမှာသူမကို ပိုက်ဆံချီးတာတွေအပြင် အလှူခံတာမျိုးတွေ မပြုလုပ်ဖို့ ပေါ်တင်သတိပေးလိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ”
ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲလက်ထပ်တဲ့ လက်မှတ်ထိုးပွဲမှာ တပြုံးပြုံးတပျော်ပျော်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကိုယ်သူ အရွှန်းဖောက်လာတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်
ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်
ချစ်သူအပေါ် တီတီတာတာမပြောပဲ ဘုဂလန့်တိုက်တတ်တဲ့ပုံစံကြောင့် ယာက်ဖဖြစ်သူ စနောက်ကျီစယ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ မောင်
အသက် (၂၀) ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို မေတ္တာရပ်ခံချက်လေးတစ်ခု တောင်းဆိုလာတဲ့ အိစိကွေး
ဂီတသက်တမ်း (၁၆) နှစ်ကျော်မှာ ထူးချွန်ဆုတွေအများကြီးမရခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာကြောင့် ကျေနပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အိမ့်ချစ်